Warbixin Qaraxa Isgoyska Soobe (dhegayso) – Radio Daljir
Warbixin Qaraxa Isgoyska Soobe (dhegayso)
Oktoobar 15, 2017 1:33 b 0
Qaraxani sida la qiyaasayo waxa uu ahaa qaraxii ugu xoganaa, uguna saamaynta badnaa dhanka kharasaaraha. Qaraxa kahor isgoyska Soobe waxa uu ahaa mid mashquul badan, dhanka isdhaadhaafka gaadiidka dadweynaha asna waxa uu ahaa mid ku socda si xawli ah.
Goobta qaraxa oo kala qaybisa degmooyinka Hodon iyo Wadajir ayaa badanaa ah meelaha ugu saxmada badan, bulshaduna ay ku badanyihiin. Hareeraraha wadada ayaa waxaa ku yaala dukaamo iyo ganacsiyo yaryar. Dadku waxa ay ahaayeen kuwo shaqadooda ku dhexjira, farxadina ka muuqato, qaarkood wadada ayey marayeen, halka kuwana ay ku mashquulsanayeen ganacsigooda, kuwana waa dukaamaysanayeen, kuwo baabuur ayey sugayeen, maadaama xiligu uu ahaa gelin danbe oo dadku inta badan ay ka rawaxaan goobaha shaqada.
Saas oo ay tahay, daqiiqado ayuu xaalku isku badalay mid muruga ah kaddib markii gaari nooca TM-ka loo yaqaan ku qarxay isgoyska Soobe. Mar wax la arki waayey, mar la wareeray, iyo markii laga wardoonay wixii dhacay, dad waxay noqdeen dhimasho iyo dhaawac meel kasta daadsan.
Goobjoogayaal ayaa sida wax u dheceen warbaahinta faahfaahin ka siiyey iyo waxyaabihii ay indhahooda ku arkayeen. Arrinta ugu yaabka badan ayaa noqotay in qaraxu uu saameeyo meelo ka baxsan goobihii qaraxu ka biloowday, waxa uuna galaaftay dhismayaal isugu jira hoteelo iyo dukaamo ganacsi oo ku kala yaal hareeraha wadada.
Walloow aanan weli helin tirada rasmiga ah ee khasaaraha, waxaa illaa iyo hadda la saadaalinayaa in qaraxani ahaa kii ugu cuslaa ee abid ka dhaca Muqdisho, uguna khasaaraha badnaa, sida la mala-awaalayo.
Cabdiqaadir Yusuf Irshaad
Warka Arooryo iyo Cumar Lakiman, Daljir Caabudwaaq (dhegayso)